Majlisni naannoo Hararii, ibsi pirzidaantii Naannoo Amaaraa kenne kan gocha Shoorarkeessitoonni raawwatan jajjabeessuu jedhe. - NuuralHudaa
Majlisni naannoo Hararii, ibsi pirzidaantii Naannoo Amaaraa kenne kan gocha Shoorarkeessitoonni raawwatan jajjabeessuu jedhe.
Manni marii dhimmoota Islaamaa naannoo Hararii, ibsa pirzdaantiin naannoo Amaaraa Obbo Temesgeen Xuruneh, haleellaa Masjidootaa fi saamicha qabeenya hawaasa Muslimaa magaalaa Mooxaatti finxaaleeyyii amantaa Ortodoksiin raawwatame ilaalchisee miidiyaaleef kenne irratti mari’achuuf guyyaa har’aa January 9,2020 walgahii ariifachiisaa waame.
Manni marichaa walgahii kana irrattiis, ibsa bulchinsi naannichaa miidiyaaleef kenne, kan Shoorarkeessitoota Masjidaa fi qabeenya hawaasa Muslimaa ibiddaan eega guban booda dhiichisaa turan jajjabeessu, kan Muslimoota miidhaman hamilee cabsu waan taheef morman. Ibsichi, sarbamiinsa mirga namoommaa kan jajjaabeessu jechuun balaleeffatan.
‘Mootummaan naannoo Amaaraa ibsi inni baase kun kan ummata Muslimaa kallattii afran irraa bahuun gocha raawwatame balaleeffatan hin madaalle. Ibsa tuffiin guutame baasuu isaa hubatuun dogongora mudate akka sirreessu gaafanna. Akkasumas mootummaan Federaalaa jidduu seenuun akka furmaata kaa’u gaafanna’ jedha Majlisni naannoo Hararii.
July 31, 2021 sa;aa 6:34 pm Update tahe